UTM ilungelelanisa kuGoogle Earth-Geofumadas
NgoNovemba, 2007 Iiphotography, Ukulanda, Google umhlaba / imephu, Topography
Ku-Google Earth izilungelelwanakho zingabonwa ngeendlela ezintathu:
Iziganga, imizuzu, imizuzwana
Amagatya, kunye nemizuzu yokugqibela
Izixhumanisi ze-UTM (Universal Traverso de Mercator
Inkqubo yesithenjwa somkhosi wezempi
Eli nqaku lichaza izinto ezintathu malunga nokuphathwa kwee-UTM izikhokelo kwi-Google Earth:
1.Ukubona njani ukulungelelaniswa kwe-UTM kuGoogle Earth.
2.Ungena njani ngokudibanisa i-UTM kuGoogle Earth
3. Ungawufaka njani amanqaku amaninzi e-UTM kuGoogle Earth kwi-Excel
4. Ungafaka njani uququzelelo lwe-UTM oluninzi, uzibonakalise kwiimephu zikaGoogle emva koko uzikhuphele kwiGoogle Earth.
1.Ukubona njani ukulungelelaniswa kwe-UTM kuGoogle Earth
Ukujonga ulungelelwaniso lwe-UTM, khetha: izixhobo / Khetha. Njengoko kubonisiwe kumfanekiso, ukhetho kwi-Universal Traverso de Mercator lukhethwe kwi-3D View tab.
Yiyo loo nto xa ujonga idatha, siza kubona ukuba emazantsi kukho izilungelelaniso kwifomathi ye-UTM. Ulungelelwaniso olubonisiweyo lilingana nendawo yesikhombisi, njengoko lihamba ngaphaya kwescreen liyatshintsha.
Injongo yale ngqungquthela yile:
I-579,706.89 m yi-X yokuhlela (Easting),
I-1,341,693.45 m yi-Y yolawulo (Northing),
N ithetha ukuba le ndawo isenyakatho ye-equator.
Umfanekiso olandelayo ubonisa indawo ye-16 kunye nenqaku apho umququzeleli womzekelo ukhona.
Ukuququzelela ukubonakala kweendawo ze-UTM kwiGoogle Earth siye sazilungiselela ifayile, ongayenzayo khuphela kule khowudi. Icinezelwe njenge-zip, kodwa xa uyidibanisa uza kubona ifayile ye-kmz enokuvulwa ngeGoogle Earth kwaye ikuvumela ukuba uchonge imimandla ye-UTM, njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo. Kubandakanya imimandla ye-UTM yelizwekazi laseMelika, iSpain nePortugal.
2.Ungena njani ngokudibanisa i-UTM kuGoogle Earth.
Ukuba oko sifuna ukufaka izikhokelo ze-UTM, ngoko sikwenza ngendlela elandelayo:
Isixhobo "sokongeza isikhundla" siyasetyenziswa. Oku kubonisa ipaneli apho ulungelelwaniso luboniswa kwifomathi ye-UTM. Ukurhuqa indawo emiswe kuyo ngokuzenzekelayo kuyitshintsha. Ukuba siyazi ukuba ukulungelelanisa, siya kuguqula kuphela kwifom, ebonisa indawo kunye nokulungelelanisa; xa ukhetha iqhosha lokwamkela, inqaku liya kubekwa kwindawo esiyibonisile.
I-Google ayinayo imisebenzi apho izikhokelo ezininzi ze-UTM zingeniswa. Ngokuqinisekileyo umbuzo wakho:
Ndiyabulela ulwazi, kodwa ndingena njani idilesi yeekhonkco?
3. Ungawufaka njani amanqaku amaninzi kwiGoogle Earth kwitafile ye-Excel.
Inyathelo 4. Khuphela imephu yeKml.
4. Ukhetho lokufaka izilungelelaniso ezininzi ze-UTM kwiGoogle Earth ngqo kwi-Excel
Ukuba oko sifuna ukufaka isethi se-UTM izikhokelo esinazo kwifayile ye-Excel, ngoko kuya kufuneka siphumelele kwisixhobo esongezelelweyo.
Kule sixhobo ongena kuyo: igama le-vertex, i-coordinates, indawo, i-hemisphere kunye nenkcazo. Kwicandelo lasekunene wongeza umendo apho uza kugcina ifayile kunye neenkcukacha.
Xa ucinezela iqhosha u "Yenza i-KML", ifayile iya kugcinwa kwindlela oyichazile. Umzobo olandelayo ubonakalisa ukuba uluhlu lwekhonkco luboniswa njani. Ifayile kufuneka ijongeke ngolu hlobo.
Khuphela i template
Ukufumana itemplate ngaphandle kwemingcele, unokufumana nayo I-Paypal okanye ikhadi lekhredithi kule sixhumo.
Xa usenza intlawulo uza kufumana i-imeyile ebonisa indlela yokukhuphela.
Inani lamaphupha ozakuguqula lidlula amanqaku e-400.
Bhala ukuxhaswa, ukunika i template yakho.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, bhalela kwi-imeyile yenkxaso editor@geofumadas.com. Ihlala ibonisa uhlobo lweewindows ozisebenzisayo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuhlaziywa kweMifanekiso ebonakalayo (Novemba 07)
Post Next KuGoogleEarth pro iifoto zinokusombulula kangcono?Okulandelayo »
Iimpendulo ezingama-90 "kuququzelela i-UTM kuGoogle Earth"
UPablo Sebastian uthi:
Molo Ngaba ungandixelela ukuba kukho inkqubo apho i-greenwich meradi inokutshintsha indawo yayo, umzekelo, ukuba idlula eSenegal okanye nakweyiphi na indawo eMhlabeni?
Makhe sibone, kukho imida emininzi yokuthatha.
1 Gcina ukhumbula ukuba ukuba ngumkhangeli we-garmin kunokuchaneka phakathi kwe-3 kunye ne-5 yeemitha zonke iingongoma ozithathayo.
2 Imifanekiso yomhlaba kaGoogle ayiqinisekiswanga ngokwe-psositioning. Ke bathambekele ekugxothweni ngamanye amaxesha ukuya kuthi ga kwi-30 yeemitha.
3 Ukuba uza kufudukela e-Arcgis, ungenisa kuphela kwinkqubo. Idatha yakho yeGPS ithembeke ngakumbi kunale onokuba nayo ngokuyihambisa ngomfanekiso kaGoogle Earth. Ukuba ufuna ukubona ukuba ayangqinelani nomfanekiso, kufanele ukuba unomnye umthombo, hayi kwiGoogle google.
Sawubona, ndinamaphuzu athile afumaneka kwiGarmin GPS kodwa xa ushukumisa umhlaba ufumane amamitha ambalwa ngaphaya apho kufanele ukuba yifoto, kunye ne-garmin izicelo azikho ingxaki.
Njani le ngxaki ichanekile ukuze udlulise ulwazi kwi-argis?
Zama ukuvula ifayile ye-kml ngokugqwesileyo okanye umhleli wombhalo ukuze uqinisekise ukuba ukujikeleza kwamanani kubonakala kwiGoogle Earth okanye kwakhona kwifayile.
Kwakhona kuyimfuneko ukubona ukuba oko kwenziwa ngenkqubo ye-von uguqule ngayo i-coordinates ukuya ku-kml.
Diego Villarroel uthi:
Ndinengxaki kuGoogle Earth pro, kuvela ukuba ndilayisha onke amanqaku endiwathatha ngoncedo lweGPS …… kwindawo nganye izilungelelaniso zazineedemals (inkqubo ye-UTM) kodwa xa kungena kwinkqubo kaGoogle emhlabeni kwakhona ezi zigqibo Ndibenza njani babuye?
HERNAN TORRES uthi:
Ingxaki yam ineGoogle Earth Pro, ayiyi kwamkela idigri, iimizuzu, imizuzwana. Njalo xa ndibazisa
Iintsomi zivele zibonisa ukuba "ASUKAZI NGALO MBANDO", kunye nabaququzeleli abanxibelelanayo, iidemali azinangxaki. Enkosi ngoncedo lwakho.
Njengoko ndibonise. Imifanekiso ye-Google Earth ayithembeki kwindawo yokubeka.
Kuthetha ukuba kwinqanaba lesalamane, zilunge kakhulu. Njengoko imeko uyenzileyo nge-RTK, endiqondayo ukuba ubeke isikhundla ngokusekwe kumfanekiso. Kwinqanaba lesihlobo kuya kusebenza kakuhle.
Kodwa kwinqanaba le-abosluto, imifanekiso ayithembeki ngokusekelwe kwiingongoma ezithathwe ngokuchaneka kwegps.
Ndincoma ukuba ubujonge kweli nqaku apho sibonisa khona okwenzekayo kwimimandla eqingqiweyo yemifanekiso.
UFredy Javier uthi:
Imibuliso yokubulela kakhulu ngesimvo sakho ingxaki kukuba xa ndenza isilungiso ngesiseko esisekwe abaququzeleli banditshintsha kwaye emva kolungiso bavele kakuhle nomfanekiso ngaphandle kwalowo ndathatha amanqaku ambalwa nge-rtk ngaphandle kwendawo yokulawula kunye nokuba abaququzeleli baphume kakuhle kakhulu Ngokubhekisele kumfanekiso impazamo ndibona kuphela kumanqaku e-static enkosi
Molo Fredy. Ngokuqinisekileyo amanqaku akho ahamba kakuhle; Ngokubanzi, imifanekiso kaGoogle Earth iguqulwe phakathi kwe-15 kunye ne-30 yeemitha. Ungajonga ukuba kwiindawo ezigqagqeneyo phakathi kwemifanekiso yee-shots ezahlukeneyo.
mira lo mzekelo
Saludos Nceda izimvo kwi q umbandela mna thaca sibe GPS grx2 sokkia xa wafaka amanqaku yolawulo ezimbini indlela static ndiya kwenza i post-processing kunye nengeniso ilungelelanise ngayo amanqaku Google eart ukundishiya wasuswa 10 ukuba 20 iimitha ngokuphathelele imifanekiso Andiyazi ukuba iGoogle yinto embi okanye into eyenzekayo ndiya kuyixabisa izimvo zakho.
Good Ndifuna ukwazi ukuba nabani na kundinika izimvo zakho malunga sokkia GPS grx2 xa ufuna ukubeka iingongoma ezimbini ulawulo static kwaye wenze le post-processing ngokungenisa uququzelelo isithuba-processing ukuya eart Google ngu ndifumana amanqaku abangenamakhaya ngokumalunga ukubana umfanekiso uhamba malunga ne-19 ukuya kwi-20 impazamo yeempazamo
Yaye ukuba ayingekho kuloo ndawo, yintoni na indawo ofuna ukuyishintsha?
Nceda ukuba umntu angandinceda ndiphethe i-nort 22499.84 kunye ne-8001.61 yolungelelaniso, ezi zilungelelaniso zihambelana nepezometer. ezi kufuneka zihambelane neZone 17 S - Peru, kodwa ayisiyiyo indlela endenza ngayo ukuze ndiyiguqulele kwindawo ehambelana nayo
Gerardo Rojas Sayago uthi:
Molweni ngoku, ndiyabulela ukuba ngubani onondinceda, ndinamanqaku amabini endiwafumene kwiGPS garmin zezi: 975815 kunye ne1241977, enye inqaku yi975044 kunye ne1241754, ndingangena kanjani nditsho ukuba imitya ebonwa kuGoogle uMhlaba iya kuba njani kwiGoogle Earth. Umda yiPanama de Arauca Colombia zone 19 N iphuma kumhlaba weGoogle ndisebenzisa iprojekti yeTransverse yedumato sedgas sirgas 2000 kunye neparameter CENTRAL MERIDIANO: -71.0775079167 latitude 4.5962004167, this 1000000 North 1000000
Ndiyabulela umntu onokubonisa indlela endinokuthi ndibamamele ngayo kwi-google lapansi okanye ndicacisa indlela okanye ndibanikeze kum sele kulungelelaniso luka google. Ndiyabulela
Yisithonjana kwi-bar ephezulu yeGoogle Earth, inguqulelo yedeskithophu.
Eli nqaku libonisa umzekelo
Juan Alberto ZambranoLoor uthi:
Ukubulisa Ndingayifumana njani i-axseder kwimifanekiso yesatellite kwiminyaka edluleyo kwi-google yomhlaba.
ukhetho alubonakali kwi-MAC yam
javier perez uthi:
Ndicinga ukuba sele ndifumene oko ndifunayo, 81 ukusuka kumanc
Enrique Rabajille uthi:
sawubona, ndinengxaki Ndithanda ukuba ukuba nindincede, ndiyayithabatha ukusuka Google Earth zilungelelanise (Ndiye ndaqonda ukuba 84 WGS) kwaye kufuneka siyiguqule psad 56 ukuba ukuncoma, linombulelo.
Erika Yojana Morales uthi:
mholo ukuchitha dwg ukuya kwiphepha lasekhaya le eart kuyimfuneko ukuba 3d yoluntu, kunye KML kumazwe i KMZ efanayo ifomathi leyo ephatha eart google, oo kulanda mappers ucwangciso, uzakufaka lula umyalelo dwg ifayile.
Ndinombuzo kuba ulungelelwaniso olucaba lendawo yam lu-104 kunye no-95 n, KuGoogle eart bavela ku-65 no-45 n… andiyiqondi…. Ndifuna ukuguqula ifayile eColombia kwaye ihlala indiphosa kwenye indawo kwaye ndizilungiselela zombini iifayile ezinokuba yimpazamo kuGoogle eart anayo ..
Iinxibelelaniso ozikhankanyiyo azifani kwihlabathi. Zilungiswa amaxesha e-60 kwi-hemisphere esemantla kunye namaxesha e-60 kwi-hemisphere esemazantsi, amaxesha e-2 kwindawo nganye ye-UTM.
Ukuze ukwazi ukuwamela, uhlala wazi indawo ekuthi bangabani, ngenxa yokuba ayinayo indawo kodwa iprojekthi.
luis tapia uthi:
bonayo umntu unokundinceda ukuba ndiguqulwe izilungelelaniso ukuya kwiindawo eziphambili
umzekelo ndinayo: 836631 x
Ndifuna ukuyibeka kwiGoogle emhlabeni
kodwa nayiphi GPS ukuba usebenzise ayiyi kunika indawo ngqo kwi stakeout wakho njengoko iGPS ayisebenzi ngexesha lokwenene kwaye uya kuba isiphoso malunga 15 eemitha
Molweni mna ndicela ezintsha oku, mna ekuqaleni nje ukuyisebenzisa, kuba ukubala mna umyili yombane, yaye umsebenzi wofakelo imigca ombane medium of thina, qhagamshelana umgca khetha ubucaka samandla andixelele ukuba uqhagamshelo ngongoma kwabo ngathi sihlanganisa na ipali, sise UTM iququzelela North 6183487, 288753 le oyi WGS84, H18, kwakunye undazise ukungena njani le datha ibe Google Earth ukufikelela imboniselo imephu, imibuliso evela eChile.
Kuxhomekeke kwi-model model.
Ukuba ubhekisela kwisiphequluli seTrex, ukuchaneka kungaphakathi kwinqanaba le-3 ukuya kwi-6 metres.
Ezinye izixhobo ze-Garmin zichanekile.
Francisco Aguilar uthi:
Laba baxhasi be-UTM abathathwe ngeGarmi GPS banokuthenjwa okanye kunoko, kukho impendulo enokwethenjelwa nento iGPS enikezela ngayo.
iiros riri rodrigo martin uthi:
Ingumxholo onomdla kwaye uncedo kakhulu
Ikunceda nawuphi na umkhangeli (GPS), ngokukhethekileyo ndithanda iGARMIN
Ndingathanda ukwazi ukuba yeyiphi idivaysi kwindawo yangasemgangathweni inokumakisha izikhokelo ze-utm endizenzayo kwi-cadastre yeprojekthi ethile kunye ne-polygon.
Oku akulula ukuzimisela.
Ingabonakala kwamanye amazwe, apho uhulumeni unikezele imifanekiso kwiGoogle, ehambelana.
Jose G uthi:
Ngaba ungazichazela ukuba imifanekiso yeGopgle iyafuduswa, yenziwe ngamabomu okanye ingaba indlela yokuyilungisa?
I-Google Earth isebenzisa iWGS84 njengeDatum.
Ukufanisa idatha yakho kufuneka usebenze kunye neDatum efanayo kwi-AutoCAD.
Imifanekiso kaGoogle Earth ikhutshiwe, ke nokuba ulungelelwaniso olufanayo, uya kufumana indawo yokuhlala. Nangona umgama ukhankanya ngokuqinisekileyo kungenxa yokuba usebenzisa enye i-Datum.
Molo makhwenkwe! Ndingathanda ukubuza umbuzo onokubonakala usisidenge kuwe. Kwi-autocad I georeference umfanekiso (jkup) ngeplagi endiyisebenzisayo ebizwa ngokuba yi "GeoRefImg», kakuhle, xa umfanekiso ubekwe kakuhle ngaphakathi kwendawo ye-autocad ndithatha inqaku elingahleliwe kwaye ndilungele izihlanganisi (x, y) kwaye ndiza kuthi UGoogle Earth kwaye ndingena kulungelelwaniso kwimodi ye-UTM kodwa andiyibeki indawo kwindawo efanelekileyo enomahluko phakathi kwe-150 kunye ne-200m. Inokubangelwa yintoni? Idatha esetyenziswa yi-Autocad ayifani neGoogle Earth? Okanye ngaba yinto ephosakeleyo kaGoogle Earth?
I-Google Earth ayinalo hlobo lwe-retic.
Uya kufuneka uvelise inkqubo ye-GIS uze uyithumele kwi-KML.
UJan eli nqaku licacisa ukuba linokuveliswa njani ngeManifold GIS, kodwa endaweni yokudala igridi esekwe kumanqanaba, uyayenza ngokusekwe kumgama kwiimitha. Emva koko ii-georeference kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kwi-kml
Ndabeka i UTM yokuququzelela udibaniso emhlabeni google, kodwa kufuneka q lo yegridi kilomentro, kuba ndifuna ukusebenzisa ukubeka uMhlaba. Igridi ephumayo ayisebenzi kum. Ngaba oku kwenziwa okanye ngaba kufuneka ndifune ngezinye iindlela? Uyamcebisa?
Okokuqala, iGoogle Earth isebenzisa iWGS84.
Emva koko, kufuneka ukhumbule ukuba imifanekiso ka-google ineendawo zokuhamba, hayi iyunifom kwaye ubona kumalungu adibeneyo phakathi kwawo. Enye indlela yokuyivavanya kukuzoba isakhiwo, emva koko kusebenze ungqimba lwenye unyaka kunye nembali leyo uGoogle anayo kwaye uyabona ukuba azidibani.
Sawubona, ndiyaxolisa ngokuphanga kodwa ndiya kuhlambalaza, andinayo ingcamango eninzi yemifanekiso kwaye ndihlala esitratweni sokufa.
Ndizama ukwenza i-geolocate ezinye zeebhasi kwiimephu zeGoogle. Mna uququzelelo e UTM, kodwa mna ayithole ukwazi ellipsoid kusetyenziswa. Kwimeko eSpeyin, ndiye ndazama ED50 kunye ETRS89, kodwa xa ukuguqula uququzelelo nasentshonalanga / inkululeko, iyeke offset mkhulu kakhulu, ubuncinane 100 yeemitha ukuba akukho ngaphezulu. Ngaba kungenzeka ukuba awusebenzisi i-datum echanekileyo? Ngaba i-Google Maps ihluleka? Ngaba ikhona na indlela yokulungisa lo mkhumbi?
Ndiyabulela kwaye nethemba unako ukundinika into ebonisa ukuba ungayilandela phi
Mna ongenamava, njani ngaphandle ilungelelanise MY EXEL GPS Garmin 60C A ??, KUNYE na MapSource Waypoints GOOGLE behlabathi AT Kodwa njengoko Ndikhuphela ?? UNCEDA
Hi Pablo, uxolo ngenxa yokuphazamiseka.
Sithumele itemplate kwi-imeyili yakho.
UPablo Cruz uthi:
Ndineengxaki ngethempulethi enkulu kakhulu yokuguqula i-UTM kwiGeograficas
Ndihlawule nge-Pay Pal kwaye xa ndivula ikhonkco abayithumele kwi-imeyile yam ndifumana ERROR
Awukwazi, ngo-AutoCAD ungasebenzisa kuphela i-UTM WGS84
Njengoko ndibona ulungelelaniso lweNyakatho-mpuma, nakwi-UTM PSAD 56
Isicelo osibhekisele kuso senziwe ngexesha eliye laphelelwa yisikhathi.
Enye inketho ukusebenzisa ii-Digipoints, isebenza kwi-intanethi, ungangena izilungiso ze-utm uze uthumele ngaphandle kml ukuze ubone kwiGoogle Earth
Molo, uxolo, ndiye ndafunda iphepha uze uzame bewuhlisele isicelo ukuba recomendabas odlulayo uququzelelo UTM nazo ngokugqithiseleyo, ukuze google emhlabeni, kodwa zange ndibe nako ukufaka inkqubo PQ lonke babecinga qeu ubhubhile, ndiyabona ukuba uhlaziyo yokugqibela yaba 2007-08, kungoku nje kukho ezinye isicelo esitsha ukuze ufumane UTM likwajongana ku Google Earth ukufumana nomhlaba?. I ukwazisa kakhulu onke ukhokelo.
Kufuneka uguqulwe izilungiso ze-UTM ukuya kulungelelaniso lweendawo.
Ngenxa yoko, ndikucebisa ukuba u-EQuery, ithuluzi le-intanethi elikuvumela ukuba uguqulwe uluhlu lwamanqaku e-UTM kwiindawo zeendawo.
Emva koko kwiGoogle Earth ungabonisekisa abo badibanisa ngokubhala kumbukeli okanye ngokuvula ifayile ye-txt
Molo «g», ulwazi olunomdla kakhulu, nangona kunjalo ndifumana imeko yokuba ndinabaququzeleli be-UTM «X» «Y» kwaye andikwazi okanye andazi, ndingayifumana njani imephu emhlabeni, ndingavuya ukuba ungandinceda
Ndidinga ukuhambisa iiplani ze-polygons ukuya kwi-Google intliziyo ndicela undazise
Molo Ana, kukho iinkqubo zento oyifunayo, edla ngokubizwa ngokuba yi-geocoding. Kodwa ihlala ixhomekeke kubume bedilesi.
Ukuba usibonisa imizekelo, sinokuyibona.
Hola¡ abazithandayo mna ukuguqula iidilesi ukuze zilungelelanise (x, y) kwaye wathi Google Earth lingakwazi kum. Ndifuna ukongeza uluhlu lwabathengi ekufuneka ukucofa kwindawo ethile. Le nkqubo apho uya ulayishe MapInfo, Google Earth kufuneka bazi ukuba mna ukufumana ukuba ulwazi okanye ukuba kukho nakuphi na Converter unako ukundinikela uququzelelo indawo, ukuba nje mna idilesi.
Ndiyathemba ukuba undixelele kakuhle. kwaye ndiyathemba ukuba unokunceda.
mbuliso no mbulelo
Kuyinto eqhelekileyo ukwahluka. Imodeli yedijithali yeGoogle Earth yenziwe lula, kwaye xa uyiguqulela kwi-AutoCAD phakathi konxantathu kunye ne-tilework ngamanqaku enziwe ukuphakama okuphakathi.
i ingxaki, xa ekuthumeleni umfanekiso kunye google nomhlaba komhlaba ukusuka civil AutoCAD ed 2010 kwahluka ezisezintabeni kufuneka phakathi komhlaba kunye nokuphakama e AutoCAD eboniswe yi Google Earth. njengoko ukusombulula le ngxaki ??
Ngokuqinisekileyo uhlala ubuncinane ubuncinci beendawo, ukuze ufumane i-polyoreferencing yakho ipoloni.
Ngombolo yokuqala ye-UTM onayo apho unokuhambisa khona iphuzu, kwaye okwesibini ujikeleze ngoba izikhombisi zeenqwelo zakho zingase zihambelane nombane ongasemgangathweni kunye nomhlaba ongasentla.
Ukuba oko kungomsebenzi osesikweni, i-GPS yakho ayizukubaluncedo kakhulu kuba ukuchaneka kwemitha kwindawo nganye ukusuka kwi3 ukuya kwi-6 yeemitha. I-polygon yakho iya kuba ngaphezulu okanye ingaphantsi kwindawo, kunye nokujikeleza okuthile, kodwa ubuncinci ungayibona kufutshane nalapho iboniswe khona kuGoogle uMhlaba.
Imifanekiso kaGoogle Earth ayiloncedo kw georeference kuba ihlala isuselwa kwenye indawo. Ke umlinganiselo wakho weGPS uthembeke ngakumbi.
Ciro El Bagual uthi:
Uxolo, ndizichaza ngcono, (ngale nto ndenziwe ngomthi, okuncinci endikwaziyo kulingo kunye nephutha) .. ndinemephu kwaye ndifuna ukuyifumana ngomhlaba kagoogle. idatha ebhalwe kwinqwelomoya ineereferensi ezinje ngezi, ireferensi ibhaliwe kumgca ngamnye (andinazo iinqwelomoya nam ngoku) ezithi umzekelo: SW 55 ° 43'24 »nge-1.245m, njalo njalo yemigca. Ingxaki yam kukuba ndinombono ongacacanga ukuba uphi, kodwa hayi kanye apho amanqaku e-polygon akhoyo. Ndifuna ukuyifumana kugoogle, kuba ndiyayazi indawo (zinje nge-2500 inayo) kodwa andinawo amanqaku okuqala, nditsho nakwisihloko.
Ngaba ndingayifumana loo ndawo kwibalazwe kunye nale datha? okanye ngaba neyokuqala?
Ngaba ndiyakwenza umzila wecala kwi-google emhlabeni? ukuba neenkcukacha ezichanekileyo zendlela zokufikelela?
Ngaba ndiyakwazi ukucacisa i-UTM kwiintlanganiso ezahlukeneyo zezifundo?
Ndiyabulela kakhulu sele sele, kwaye ndibuhlungu ngenxa yokungabi nalwazi kolunye ulwazi, kodwa kwakhona andiyiqondi into emalunga nesi sifundo. NdineGarmin Vista GPS.
UCiro Venialgo -Umvelisi.
Ewe, ukuba ngaba zikhokelo, ngoko, faka nayiphi na indawo njengemvelaphi, uze ubeke ifom:
nqakraza, nangaliphi na indawo
@ 1200<="" p="">
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayifumana ipoligoni enedatha kuphela yemigama yeebheringi ,,, umzekelo isihloko se-NW 35 ° 25 '33 ″ CO 1200 m… njalo njalo nezinye iinkcukacha. Ingxaki endiyifumanayo kukuba andinasiqalo okanye indawo yokuqala kwaye ngokubanzi ndicinga ukuba ziyi-UTM okanye ° 'kwaye »kodwa umzekelo: N 65 ° 34' 27 ″.
izibhengezo zendiza endiyiyo yonke idatha NO NO SE okanye nantoni ... ngiyabonga ..
Yiyiphi inkqubo onayo?
Ukuba into onayo yi-AutoCAD, kufuneka uyenze ntoni:
ngoko ubhala ulungelelaniso lokuqala lwefom ye xxxx, yyyy
ubhala oku kulandelelana xxxx, yyyy
kwaye yile ndlela i-polygon yakho izakhiwa ngayo
kangangoko ndinako, ukuze msebenzi yepholigoni, kufuneka uququzelelo UTM kodwa andikwazi sisiphi libuza mna izidanga kwaye kuphela uququzelelo UTM le eziphezulu, ndiyathemba ungenza ukunceda
Nceda, ndiyikhuphele njani kuGoogle Earth ukuze ndibe nokudibana kwe-UTM yesixeko sam ...
Ndiyabona ndifuna ukuvota ibhokisi elinobuhlanga elibonisa ukulungelelaniswa kwipolygoni okanye ukulungelelaniswa
Molo, ndizama ukusebenzisa i-Excel epoint2ge macro kodwa isixelela ukuba beta esele q okuphelelweyo kufuneka afumane olunye uhlelo evela kwisiza, ngoku iphepha 2.0 version ayifumaneki
Molo, hayi ukuba ndingazinceda mna Ndenza umsebenzi kwaye kufuneka ukufaka amanqaku isampuli kwimaphu kunye GPS uhlela abe ngemizuzu, segundos..ahora njengoko abapasa ezi uququzelelo ukuba lasekhaya inkqubo emhlabeni oq kum ayifunde
Molo, mhlawumbi akunanto yakwenza umbuzo yam apha, kodwa ndiyathemba ungenza ukundinceda. Ndifuna ukwazi ukuba ukuguqula indlela UTM likwajongana e PSAD 56 ukuya WGS84, ngenxa yokuba zilungelelanise kwi Datum lokuqala kwaye ufuna uzibone kwi Google Earth I ukuqonda usebenzise amanye Datum.
Ndifuna ukubona imifanekiso ngokwahlukeneyo kuba sishiya ngokwahlukeneyo ndibona iifoto ze3 zeendawo ezintathu emhlabeni kunye nabanxibelelanisi bazo andiboni mfanekiso mbi uhlukaniswe njengemifanekiso yokubulela ukubona ukuba bayandinceda na ndingumfundi we-topogi yase-Arequipa Peru
jose melvi fiallo font uthi:
Molo! Ndingumfundi kwi-PFG yoLawulo lokusiNgqongileyo kwiYunivesithi yaseBolivarian yaseVenezuela. I-Google Earht yinkqubo elungileyo yokufumana nayiphi na indawo, kodwa kufuneka uyihlaziye, ngenxa yeenguqu kunye nolungelelwaniso olwenzekayo kwiplanethi. Imifanekiso ebonakala iluncedo kodwa ayihambelani ngoku. Oku kwenzeka kunye nemilambo ehamba phantsi kotshintsho olukhulu. Ingcebiso nje Enkosi ..!
Kulungile, ndiyavuya ... kwaye ndamkelekile kwihlabathi lokuzingela kwezobuchwephesha
ARQ. GUSTAVO FERNANDEZ uthi:
Thatha uvavanyo Terramodel Trimble kuzisa converter nokulungelelanisa iinkqubo kunye converti of nad27 ukuba nad 83 ziye zenzeka kwaphucula indawo elalisakuba kuni ukulayisha likule nto herror lelinye icala 35mts kumda kwaye ngaphaya umda 50mts. zonke ngeNdisifumanekanga kwinkqubo yam ukuba ndiyamkela i-geoid ye-wgs84. ukuba uyayifaka kodwa ayivumeli ukuba ndiyikhethe.
isishwankathelo akhawunti zenza into ondixelelayo onokubulela.
Kwi nkampani I sisebenzela isikhululo iyonke kuphela, yaye xa besebenza ngamanye amaxesha umxhasi isinika zophando-nzulu ngobume nge GPS kunye kulo mzekelo akezi inkcazelo epheleleyo ngesimo, ndithetha ukuba ukuba nad27 okanye ukuba revizarlo. Le yinjongo yobuqu kunye nokuqonda i-google. Kwipropati ekubhekiselwe kuyo sele sele ibeke iidokodo zokulawula. kuphela ukuba belahlekile kufuneka siyazi apho bafumana khona izicwangciso ze-utm.
Inyaniso kukuba ndiza kuqhubeka ndihlolisisa i-google kunye nezinye iiplagi kunye nephepha elithandayo. Ndiyabulela ngokuphendula kwakho ngokukhawuleza. Ndiza kuqhubeka ndithatha inxaxheba.
kuba into echanekileyo yi-GPS yakho, imifanekiso yeGoogle ibinomlinganiselo wokungena kwi-XMUMX okanye ngaphezulu.
Kwimeko yakho, imitha eyi-200 enhle, inokuba ngaba bakhuliswa ngenye i-datum, umzekelo nad27 kunye neGoogle yi-wgs84
ukubingelela enkosi kakhulu ukuba inkqubo, umdla kunye uyaphumelela sibeke buyimilo wepropati, kodwa kukho intandabuzo: kwenziwa ngayo echanileyo, Ami ndandiphuma a iimitha phase shift 200 ezantsi? Ngoku ukwqhatha iingongoma e Terramodel kunye nesihamba ngayo koko kubonakala kodwa kwenzeka ntoni? Akuyi kuba yinto ecacileyo kwi-google, okanye i-GPS ezenzileyo uphando akuyiyo into enjalo?
Ndiyabulela ukuba ndikhokele, ndiza kugcwele i-google kunye neenkonzo zayo kunye ne-3d yaseburhulumenteni.
IMPORTO 3D A CIVIL KUNYE UMMANDLA lomfanekiso GOOGLE UMHLABA ebusweni REAL Prendo Eekhonto umphakamisi KUNYE NENKQUBO UBONAKALA ME alufani njengoko kubonwe GOOGLE. KWI-GOOLE IPHELA UKUPHUMA KWAMAPETHE KWI-NETHA YOLUNTU. UMBUZO:
UYAZIWA NJANI INDLELA YOKWENZA UBALULEKO NGOKUBA UYA KUFANELEKA NGANYE ISICWANGCISO SOKWENZA UKUBONA KU GOOGLE?
NAKUBA NAKUBA NABAFUNDI.
Ewe, uchaza enye imida emfutshane:
Oku kwenziwa nge sixhobo Excel2GoogleEarth
1 Kuya kufuneka unxibelelanise, kunjalo, okunokuba ngumzekelo X = 667431.34 Y = 1774223.09
2 Uzibeka kwifayile egqwesileyo, kwiikholamu ezahlukileyo (zinokuba zimbini)
3 Qalisa inkqubo
4 Kulapho ungena kwindawo apho ezi ngqungquthela zikhona, kunye nolunxwemeni (ukuba lusempumalanga okanye ngasentla)
5 kwiqhosha lasekunene le "datha" ukhetha iiseli zeliphepha eligqwesileyo apho unezihlanganisi
6 Ubonisa umyalelo, ukuba x ngowokuqala, kwaye ke ungathi empumalanga, akukho nto
7 ngoko ubonisa apho ufuna ifayile ye-kml igcinwe
8 Xa ucinezela iqhosha le-OK, ifayile iya kwenziwa.
Ukukubona kwiGoogle emhlabeni, wenza ifayile, uvule kwaye ubukele le fayile ye-kml.
U-HELLO, UNGENZA NJENGENZALO YOKUBHUBA IINKCUKACHA EZIPHUMA KWI-UTM KWI-GOOGLE EHLABENI
Sawubona uRichy Le khowudi ineposi ezinikezelwe ukusebenzisa isixhobo sayo.
ukuba emva kokukubona ungathandabuzeki ukuba undixelele.
Molo, NDIFUNA chazele indlela, ONOKUCINGA NJENGOKO UNAKO Point UTM iququzelela ON GOOGLE EMHLABENI
Andibonanga isicelo esenza oko, kukho enye ebonisa kuzo kwiimephu zeGoogle, kule ngxelo ndithetha ngayo
Ndingayifumana njani iirebe ezivela kwiGoogle Earth?
Ndiyihlolisise, kodwa ngaphandle kokundinika ulwazi kwesikrini, andinakuyithumela ukuba ihlale kwiCAD okanye kwi-Excel, kwaye ulwazi lobunzima alusayi kuthunyelwa ngaphandle.
Kwimeko nayiphi na into, ndiyakuxhasa nezinye izixhobo ozibonise zona, kuba ngokuqinisekileyo kuya kuba luncedo kum ngamanye amaxesha.
Ndiza kuqhubeka ndikhangela enye ingcaciso apha, kwakhona.
Into endiyaziyo kukuba i-3D 2008 Software Software evela kwi-Autodesk ikuvumela ukuba ufumane iikhephe zamanqanaba okwenyani kwi-Google Earth umfanekiso kwaye ulandelele indawo yomhlaba ukuba uphonse kuyo.
Nantsi ingcaciso yeyywhatsthat
Ndichaza. Ndiyilandela nayiphi na indlela kwi-Google Earth. Ndiya kusilondoloza njengoko * .kml, kodwa inguqu programitas yabonisa ukuba coordenas uhambo, kuyabonakala ukuba nam Coordendas Geographic (Latitude, Longitude) kunye 0 inqanaba. Into Kufuneka ubuncinane ukuba ifayile kunye uququzelelo e Google Earth screen ubonisa xa uhambisa i wesalathisi se phezu umfanekiso.
Masibone ukuba uzicacisa ukuba uya kukunceda. Idatha onayo yohambo onayo? Unjani? Ngaba kwisikrini soMhlaba weGoogle okanye ngaba uye wayifumana ngenye indlela?
Ndiyabonga, kodwa iingongoma ezithunyelwayo zisekuhlaleni (i-Latitude, i-Longitude) kunye nesimo asibonakali. yinto endiyidingayo ebaluleke kakhulu.
Oku kwenzekayo kunye ne-Excel, apho kubonakala khona amaphupha amacwecwe, kunye ne-0.
Eyona nto yokuqala kukuba wenze ifayile ye-kml, ngenxa yoko unokwenza kunye nezixhobo ezikhoyo kwiprogram, nokuba ngamanqaku okanye njengeendlela.
ulondoloze njengefayile ye-kml
ukukhuphela ii-coordinates uyakwazi ukuguqula ukusuka kwi-kml ukuya phambili, u-autocad, i-arcview okanye i-GPS
kule post ndibonisa ezinye izicelo ezenza oku
Ndingakukhuphela njani kwiGoogle Earth iinqununu zendlela ebendiyilandelayo kwesikrini?
Sawubona uSarah, ndincoma
Ungangena idatha ye-utm ngokugqithiseleyo, kwaye ke inkqubo iya kukudala ifayile ye-kml.
Endinixelelayo ngenxa engaphambili, ukuba unokukunika iingxaki ukuba Excel ukhuseleko macro kakhulu, kangangokuba uye Izixhobo, khetha, ukhuseleko, ukhuseleko macro, wayibeka phezu lisezantsi
uze ulondoloze ifayela eligqwesileyo, phuma kwaye ungene kwakhona
USarahi Pacheco uthi:
Ndifuna ukumakisha ezinye indawo kuGoogle Earth ukubonisa umsebenzi wesampulu yezilwanyana… Ndinezilungelelaniso kodwa andazi ukuba ndingazifumana njani ngqo kuGoogle emhlabeni… izilungelelaniso zikwiUTM… Ungandixelela ukuba indlela ingaphawulwa ngokujonga ngokuthe ngqo ulungelelwaniso lwe-UTM? ?…Enkosi!!!!
Molweni Ernesto, le mfuno zisezantsi yi Windows 2000 google emhlabeni, kwaye mahala (ubuncinane 128 kbps) kufuneka, ubuncinane ukufaka download data intanethi.
Ngaphandle konxibelelwano, ukusetyenziswa okuncinci kunokwenziwa, kuba eyona nto ibaluleke kakhulu lulwazi olubonisayo njengoko usondela okanye usiya kude ... kwaye oku kunokuqhagamshelwa kuphela.
nceda ndixelele indlela yokukhuphela okanye ukulungisa ipaki ye-google yomhlaba ndisebenza ngaphandle kokuxhumeka kwi-intanethi kwaye ukuba kukho inguqulo ye-win98